ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ (Voon et al, 2014 ။ ) မူးယစ်ဆေးစွဲကိုထင်ဟပ် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အတော်များများကပိုပြီးအာရုံကြောလေ့လာမှုများ။ ဒီစာမျက်နှာကိုကျော်စာရင်းပြုစုထားသည် 50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) သည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 30 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့တို့က, အညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ် supporting ။ (ဤရက်စွဲစက္ကူတစ်ဦးစာပေပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်ခဲ့ ထိုသို့ကိုးကားခဲ့စာတမ်းများအရှိဆုံးအတု။ )
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 110 လေ့လာမှုများကျော်ယခုရှိပါတယ်
ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်း (သည်းခံနိုင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသောအရသာရှိခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း) ကိုတွေ့ရှိသည့်လေ့လာမှုများမှအနည်းဆုံးလေ့လာမှု ၅၀.
YBOP Comments (ဇူလိုင်လ, 2014)
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Valerie Voon လေ့လာမှုသည်ယူကေမှတ်တမ်းတင်တွင်မီးမောင်းထိုးပြသည်“အဆိုပါဦးနှောက်အပေါ် porn"နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုတုန့်ပြန်သည့်နည်းတူပင်ညစ်ညမ်းရောဂါများကိုတုံ့ပြန်သည် လေ့လာမှုအပြည့်အစုံနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်"
compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် ( သာ. ကြီးမြတ်လိုသော) porn အလိုအလျောက်ပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ကဲ့သို့) ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်စွဲ၏လက်ရှိမော်ဒယ်နှင့်အတူဿုံ aligns, နှင့်ပယ်ချ သီအိုရီ "ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပျော်မွေ့လိုသောကြောင့်သာ၎င်းတို့လိုချင်သောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်ဟုယူဆကြသည်။ ဤသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်လူသိများသည် မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု, စွဲရောဂါ၏အမာခံများဖြစ်၏။
(မီဒီယာအစီရင်ခံမဟုတ်) အခြားအဓိကတွေ့ရှိချက်ဘာသာရပ်များ၏ 50 ကျော်% (ပျှမ်းမျှအသက်: 25) ခဲ့ကွောငျးအခက်အခဲအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူရရှိခဲ့သေး porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။ လေ့လာမှုကနေ (CSB compulsive porn အသုံးပြုသူများကိုရည်ညွှန်း):
"အရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံစကေးတစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းတွင် ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB ဘာသာရပ်များလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူသိသိသာသာပိုပြီးအခက်အခဲရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမို erectile အခက်အခဲများကြုံတွေ့ပေမယ့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း sexually ဖို့မ (စားပွဲတင် S3 အတွက် S1 file) ။ "
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သုတေသီများ porn တွေကိုထိတွေ့တဲ့အခါမှာအငယ်ဘာသာရပ်များဆုလာဘ် circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော dopamine spikes နှင့်ပိုမိုဆုလာဘ် sensitivity ကိုဖြစ်ခြင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက်အဓိကအချက်များဖြစ်ကြောင်း စွဲဖို့ပိုအားနည်းချက် နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်။
(ဒီလေ့လာမှုမှာVoon et al။ 2014) သုတေသီများ၏ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေ့ရှိရ ာင်း compulsive porn အသုံးပြုသူများကိုပါ။ အသိမြှသုံးစွဲဖို့တဏှာမှဦးဆောင်လျက်, core ကိုစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့စဉ်းစားကြောင်းတွေကိုမှ Hyper-reactivity ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက သက်သေအထောက်အထား၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ် ဒါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရဲ့အကြံပြုထားသည် DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်း။ ဤကိစ္စတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ရှင်များတွင်ဘာသာရပ်များသည်အကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိပါကတိကျသောဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်တည်ဆောက်ပုံများတွင်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာရန် fMRIs များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အာရုံခံစားမှုခံစားမှုကိုစစ်ဆေးသည်။ ခဲသုတေသီအဖြစ် Valerie Voon said:
“ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူရှိတဲ့လူနာတွေနဲ့ကျန်းမာတဲ့စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းတွေအကြား ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုမှာကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ထင်ဟပ်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ”
နောက်ထပ်သော့ချက်ကျသောတွေ့ရှိချက်မှာမလိုမုန်းတီးသောအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့ထက် ပို၍ မကြိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်နှင့်အတူperfectlyုံ align အဆိုပါစွဲမော်ဒယ် ဆေးစွဲသူများအနေဖြင့်သုံးစွဲလိုစိတ်ပြင်းပြစွာပြင်းထန်စွာခံစားရသော်လည်း“ it” (မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ) ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိကြပါ။
အဆိုပါသုတေသီများလည်းသူတို့ကဗီဒီယိုကြည့်နေတုန်းခံစားခဲ့ရနှင့်မည်မျှသူတို့ဗီဒီယိုများကြိုက်တယ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အဆင့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲမှသင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။ သူတို့ကပျော်မွေ့ထက်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မူးယစ်ဆေးစွဲသူတို့၏မူးယစ်ဆေးရှာမောင်းထုတ်ခံရဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ ဤသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်စဉ်ကိုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု, စွဲလမ်းမမှန်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုသီအိုရီအဖြစ်လူသိများသည်။
မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူလူနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများဆီသို့အလိုဆန္ဒ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ပြသပေမယ့်သေချာပေါက်ရမှတ် like နှိပ်အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသူတို့ကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲခဲ့ပါဘူး။
အထက်ပါတွေ့ရှိချက်အခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရှိခြင်းတစ်ဦးချင်းစီရိုးရှင်းစွာပိုမိုမြင့်မားလိင်စိတ် posses နှင့်လူဦးရေ၏ကျန်ထက်ပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းငြင်းခုံဆန့်ကျင်။
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုကင်းဘရစ်လေ့လာမှုများ၏ဒေါက်ပေါ်ရောက်လာ ဂျာမန်လေ့လာမှု အရာအသုံးပြုတဲ့အကြိမ်ရေများနှင့်ညစ်ညမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာအတူအများအပြားဟာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဆက်နွယ်နေကြောင်း။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများရိုးရှင်းစွာအဘယ်အရာကိုအတည်ပြု 110 အင်တာနက်စွဲဦးနှောက်လေ့လာမှုများ ပြသခဲ့သည်မှာ - အင်တာနက်သည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာသင်ယူမှု (စွဲလမ်းမှု) ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲသူများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
အပိုဒ် ၁ - လိင်စွဲလမ်းရီးရဲလ်ပြီးနောက်အားလုံး Be နိုင်ပါစေ
"မမေးခှနျးက [ဤလူ] ခံစားနေရပြီးနေကြတယ်ရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဦးဆောင်လေ့လာမှုကိုရေးသားသူဒေါက်တာ Valerie Voon ကဆိုသည်။ "သူတို့ရဲ့အပြုအမူသူတို့အပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း, function ကိုများစွာအဆင့်ဆင့်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းအထူးသဖြင့်လူမှုရေး function ကိုများနှင့် ... ဖြစ်ပါတယ်။ "
“ ဒီလေ့လာမှုကလူတွေဟာဒီရောဂါဟာတကယ့်ရောဂါဗေဒဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်၊ ​​ဒါကတကယ့်ရောဂါပဲ။ ဒါကြောင့်လူတွေဟာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားစေတဲ့အရာလို့မသတ်မှတ်ကြဘူး။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတို့ကိုမည်သို့ရှုမြင်သည်နှင့်၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဒေါက်တာရစ်ချတ် Krueger, ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်က Psychiatry ၏တွဲဖက်လက်တွေ့ပါမောက္ခသူသုတေသနလယ်ပြင်၌တစ်ဦး "seminal လေ့လာမှု" ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်ဟုဆိုသည်။
"ဒါဟာတဦးတည်းရဲ့, ဒါပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားတွေများထဲမှအလွန်များပြားလှသော, နည်းနည်း," 2008 ထံမှ 2013 ဖို့ DSM-5 မှဆက်ပြောသည်ခံရ hypersexual ရောဂါအဆိုပြုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဆရာဝန်ကော်မတီကအပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ Krueger ကပြောသည်။ "[အဆိုပါလေ့လာမှု] ဤအမှုသည်ငါ့မြင်ကွင်းထဲမှာတစ်ခုရောဂါဖြစ်ပြီး, ကျွမ်းကျင်သူများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်မီဒီယာဟူသောအသုံးအနှုနျးမှတဆင့်ယခုတချို့သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ "
Tara Berman, MD အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဇူလိုင်လ 11, 2014
လိင်စွဲအမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းရှိမရှိကျော်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအဦးနှောက်သို့ peers အသစ်တစ်ခုလေ့လာမှုအားဖြင့်အိပ်ရာထားနိုင်ပါသည်။
ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းကျန်းမာဘာသာရပ်များ၏တူညီသောအရေအတွက်ဖို့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူ 19 လူများ၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ဦးနှောက် Scan ဖတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုသူတို့တွေ့ရတဲ့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအဦးနှောက်ထိုကဲ့သို့သော compulsive မရှိဘဲသူတို့အားထံမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းထဲမှာ "တက် lit" အဲဒီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့မူးယစ်ဆေးနှင့်ထိတွေ့သောအခါစိတ်ဝင်စားစရာဤလူအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation များ၏ပုံစံများမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဦးနှောက်တွင်တွေ့မြင်သူတွေကိုထင်ဟပ်။ ထိုမှတပါး, လိင်စွဲ '' ဦးနှောက်တွင်ပိုမိုတက် lit သောသုံးအထူးသဖြင့်ဒေသများ - ထို ventral striatum, dorsal anterior cingulate နှင့် amygdala - ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်တဏှာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများဒေသများဖြစ်ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး, ခံစားခကျြသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များနဲ့မထိန်းချုပ်စွဲ - Voon အဆိုအရအဖြစ်အများအပြား 25 လူကြီးများအတွက်တစ်ဦးအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားသူများသည်မကြာခဏအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ်ခံစားချက်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်ကုသမှု options များကန့်သတ်ကြသည်။
လောလောဆယ်ဒီအခွအေနေအဘယ်သူမျှမဖဲကြိုးဖြတ်လက်ခံခဲ့သည်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လည်းမရှိ။ ဒါဟာသေး DSM-5 အတွက်အသိအမှတ်ပြုမခံခဲ့ရ - မကြာခဏစိတ်ရောဂါအခြေအနေများ၏ "ကျမ်းစာ" အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤလမ်းအတွက်အသိအမှတ်ပြုသည်အထိပြုလုပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးတိုးပွားလာသူတို့လိုအပ်ဆိုအကူအညီနှင့်ကုသမှုရဖို့ကဤအခြေအနေနှင့်အတူသူတို့အဘို့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်။
"လူတွေက moralistic တစ်ခုခုအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပယ်ချမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ငါကလူကဒီအမှန်တကယ်ရောဂါဗေဒကြောင်းကိုနားလည်ကူညီနိုင်မယ့်လေ့လာမှု [ငါတို့ဖြစ်ပါသည်] စဉ်းစား, ဒီဟာအစစ်အမှန်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်" ဟု Voon ကဆိုသည်။ "ဒီလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်ကိုဘယ်လိုရောဂါဗေဒကနေမတူညီတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
သုတေသနနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများလေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သော compulsive လောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းအဖြစ်တရားဝင်မှုကဲ့သို့တူညီသောဒီဂရီကိုလက်ခံရရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်သကျသပွေဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောသည်။
သို့သော်ဒေါက်တာ Reef Karim က, UCLA မှာတွဲဖက်လက်တွေ့ပါမောက္ခများနှင့်စိတ်ရောဂါ, ရလဒ်သတိနဲ့အနက်ထားရမည်ဟုဆိုသည်။ အထူးသူကပြောပါတယ်, ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုခံရဖို့အလို့ငှာလူပိုကြီးတဲ့, ပိုမိုကွဲပြားခြားနားအုပ်စုတွင်ပြသခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
"အပြင်အမျိုးသမီးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှင့်အတူသူတို့အားလိင်ကွဲယောက်ျားကနေအသက်အပိုင်းအခြားတိုးမြှင့်ခြင်းမှ, သင်ကလူလိင်ထွက်ပြုမူစေခြင်းအလိုငှါကိုအခြားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ရှိသည်," Karim ကဆိုပါတယ်လည်း Beverly အတွက်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာဒါရိုက်တာတစ်ဦးသောသူသည် တောင်ကုန်းတစ်ခုစိတ်ကျန်းမာရေးရေးစင်တာသည်အခြားစွဲလမ်းမမှန်အကြား, လိင်စွဲဆကျဆံသော။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွရောဂါ, ADHD နဲ့ OCD အဖြစ် - - လိင်ကထုတ်ဆောင်ရွက်ရန်လူနာမောင်းသောသူသည်တစ်ခါတစ်ရံသည်အခြားအခြေအနေများရှိပါတယ်သူကဆက်ပြောသည်။
ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အတူသူတို့၏အစိတ်သို့ peers ကြောင်းအရေးပါတဲ့လေ့လာမှုဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်, ပိုပြီးသုတေသနနောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထို့အပြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် - အဖြစ်ကကုသနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်။
ဒါဟာအဘယ်သူ၏အသက်တာကိုအဆိုးသည်ဤ obsessive နှင့် compulsive ကြောင့်ထိခိုက်နေကြများစွာသောလူရှိပါတယ်ကြောင်း, သို့သော်ရှင်းပါတယ်။ ငါတို့သည်တံဆိပ်ကပ်ပုံကိုရှိနေသော်လည်းဤလူအကူအညီနဲ့လိုအပ်ပါတယ်။
"အဓိကအချက်ကဒီ ပို. ပို. လူရောက်သောအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ကြောင်းနှင့်အဘို့ပိုကောင်းကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နောက်ထပ်စရိုက်လက္ခဏာတွေလိုတယ်" Krueger ကဆိုသည်။
အပိုဒ် ၁ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မူးယစ်ဖြစ်ပါသည်, သိပ္ပံပညာရှင်များရှာတွေ့
Key ကို Quotes:
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာ Valerie Voon က“ ငါတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုမှာလူနာတွေဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဖို့သိသိသာသာအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရပြီး၊ သူတို့အတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်။
“ နည်းလမ်းများစွာအရသူတို့သည်သူတို့၏အပြုအမူတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲသောလူနာများနှင့်တူညီကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤတူညီမှုသည် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့သိလိုခဲ့သည်။
သုတေသနကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသော Wellcome Trust မှ ဦး နှောက်အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနအကြီးအကဲဒေါက်တာဂျွန်ဝီလျံကဤသို့ပြောကြားခဲ့သည် -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းစသည့်အပြုအမူများပါ ၀ င်သည်။
“ ဒီလေ့လာမှုကကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာလဲဆိုတာသိဖို့နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ဆင့်တက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သိတဲ့အပြုအမူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းရောဂါများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်ဖြစ်စေ၊ သံသရာကိုဖျက်သိမ်းရန်မည်သည့်အချိန်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မည်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ဤသုတေသန၏အရေးကြီးသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ”
အေဂျင်စီများ, BST 11 ဇူလိုင် 2014 အားဖြင့်
Roxy Music ကြယ်ပွင့် Bryan Ferry က“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မူးယစ်ဆေးဖြစ်သည်” ဟုကြေငြာသောအခါသူသည်အမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ယခင်လေ့လာမှုများ 25 လူကြီးများအတွက်တဦးတည်းမှတက်သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး, ခံစားခကျြသို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးစွဲကြောင့်ထိခိုက်စေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့ကြသည်။
လိင်စွဲလမ်း၏ပြည်သူ့အသိအမြင်သရုပ်ဆောင်များကိုမိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလပ်နှင့်ဒါဝိဒ် Duchovny အပါအဝင်ပြဿနာများအတွက်အကူအညီရှာကြံနာမည်ကြီးတွေအားဖြင့်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။
အဆိုပါကင်းဘရစ်သိပ္ပံပညာရှင်များ 19 အထီးလိင်စွဲစုဆောင်းသူတို့ကိုထိုကဲ့သို့သောနှင်းလျှောစီးသို့မဟုတ် skydiving အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အားကစားအတွက်စေ့စပ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများသို့မဟုတ်ကလူဖြစ်ဖြစ် featuring တိုတောင်းသောဗီဒီယိုများအားကစားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အမျိုးသားများ၏ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (fMRI) စကင်နာကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးခဲ့သည်။ လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်မသက်ဆိုင်သောစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအုပ်စုနှင့်ထပ်တူထပ်မံစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ဦးနှောက်သုံးဒေသများကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသည် ventral striatum, dorsal anterior cingulate နှင့် amygdala အတွက်ထက်လိင်စွဲ၏ဦးနှောက်အတွက်အထူးသဖြင့်ပိုပြီးတက်ကြွဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အားလုံးသုံးလည်းမူးယစ်ဆေး-ယူပြီး paraphernalia တို့ရှေ့မှာခြင်းဖြင့်နှိုးဆွမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် activated ခံရဖို့လူသိများကြသည်။
အဆိုပါ amygdala ဖြစ်ရပ်များနှင့်စိတ်ခံစားမှု၏အရေးပါမှုကိုတည်ထောင်ရန်ကူညီပေးသည်နေစဉ် ventral striatum နှင့် anterior cingulate, ဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မျှော်လင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။
အသက်အရွယ်နုပျိုသောသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတုံ့ပြန်မှုအတွက် ventral striatum ပိုမိုလှုပ်ရှားမှုပြ, ဤအသင်းအဖွဲ့လိင်စွဲထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
အစွန်းရောက်သောအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန် ဦး နှောက်၏ရှေ့ပိုင်းထိန်းချုပ်မှုဒေသများသည်နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်အလယ်ပိုင်းသို့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကထောက်ပြသည်။ ၎င်းသည်လူငယ်များကိုပိုမိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒေါက်တာ Voon ကဆက်ပြောသည် -“ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမဲ့အခြေအနေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အသုံးမပြုနိုင်တာကိုသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုသည်မူလအားဖြင့်စွဲလမ်းနေကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုသေချာစွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုနားလည်ရန်သုတေသနများစွာလိုအပ်သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အွန်လိုင်းဂျာနယ်သိပ္ပံ ONE ၏ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်ထဲမှာပေါ်လာပါသည်။
အပြည့်အဝဆန်းစစ်ချက်: နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014 Jul 11;9(7):e102419။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0102419 ။
Voon V1, ပှေးကောငျ TB2, ကမ်း P3, တံခါးစောင့် L3, မောရစ် L4, Mitchell က S2, Lapa TR3, Karr J5, Harrison NA6, Potenza MN7, Irvine M3.
1စိတ်ရောဂါကုသရေးဌာန၊ Addenbrooke's ဆေးရုံ၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၊ ကင်းဘရစ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အပြုအမူနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၊ ကိန်းဘရစ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း; Cambridgeshire နှင့် Peterborough Foundation Trust, Cambridge၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
2စိတ်ရောဂါကုသရေးဌာန၊ Addenbrooke's ဆေးရုံ၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၊ ကင်းဘရစ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ Cambridgeshire နှင့် Peterborough Foundation Trust, Cambridge၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
3စိတ်ရောဂါကုသရေးဌာန၊ Addenbrooke's ဆေးရုံ၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၊ ကင်းဘရစ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
4စိတ်ရောဂါကုသရေးဌာန၊ Addenbrooke's ဆေးရုံ၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၊ ကင်းဘရစ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အပြုအမူနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၊ ကိန်းဘရစ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
5တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် Psychotherapy များအတွက်ဗြိတိန်အသင်းလန်ဒန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
6စိတ်ရောဂါကုသမှု, Brighton နှင့် Sussex Medical School ကျောင်းတွင်မ, Brighton, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ဦးစီးဌာန။
7စိတ်ရောဂါကုသမှု, Neurobiology နှင့်ကလေးလေ့လာမှုစင်တာ, ယေးလ်တက္ကသိုလ်, New Heaven, Connecticut, အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ဦးစီးဌာနများ။
Veronique Sgambato-Faure, Editor ကို
YBOP မှတ်ချက် (CSB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို compulsive ကိုရည်ညွှန်းသည်) နှင့်လေ့လာမှုကနေကောက်နှုတ်ချက်:
နီကိုတင်း, ကိုကင်းနှင့်အရက်၏မူးယစ် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာလေ့လာမှုများ ventral striatum အပါအဝင်ကွန်ရက်များ ဆက်စပ်. အ, dACC နှင့် amygdala 13။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာဤဒေသများနှင့်အတူအဖွဲ့များကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကြည့်ရှုစဉ်နှင့် CSB မပါဘဲ activated ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ် CSB တွင်ဤဒေသအားကောင်း Active ၏လေ့လာရေးအတွက်မမှန်ဖြတ်ပြီး neurobiological တူညီအကြံပြုခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအဘို့အစောင့်ကြည့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆင်တူသည်။
ဘာသာပြန်ချက်: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသူများသည်ထိတွေ့မိသည့်အခါ ဦး နှောက်ဒေသများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသော libido သို့မဟုတ်ပိုမိုနှစ်သက်သောကြိုက်နှစ်သက်မှုမရှိပါ။ ယင်းအစားသူတို့သည် ပို၍ လိုချင်သောသို့မဟုတ်တပ်မက်မှုပိုမိုခံစားခဲ့ရသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး-salience သီအိုရီနှင့်အညီ, like နှိပ်ထံမှ dissociated သည်ထင်ရှားလိုသော၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီအမံ 12 အဓိကဆုလာဘ်များမြှင့်တင်ရန်လိုသော်လည်းမအကြိုက်အဲဒီမှာတည်ရှိရသော။
ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များ သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခဲ့သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုလိုသောနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုပိုမိုအကြိုက်ရမှတ်ခဲ့, အရှင်လိုသောနဲ့အကြိုက်အကြားတစ်ဦး dissociation ဆန္ဒပြနေသော။ CSB ဘာသာရပ်များလည်းရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် erectile အခက်အခဲများပိုမိုချို့ယွင်းခဲ့ပေမယ့်မပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်မြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရမှတ်မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒယေဘူယျအဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုနှင့်မတိကျသောဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
ဘာသာပြန်ချက်: ခေါ်တော်မူစွဲလမ်း၏လက်ခံခဲ့သည်မော်ဒယ်နှင့်အတူ aligned ဒီလေ့လာမှုမှာ compulsive porn သုံးစွဲသူများ မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု or မက်လုံးပေးာင်း။ စွဲသူများသည်“ ၎င်း” ကိုအသုံးပြုရန်ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုကိုခံစားကြရသည် (ချို့တဲ့), သေးသူတို့မကျင့် ကဲ့သို့ Non- စွဲထက်မဆိုပိုပြီး "က" ။ သို့မဟုတ်အချို့ကပြောသကဲ့သို့“ ပိုပြီးလိုချင်တယ်၊ နည်းနည်းလေးကြိုက်တယ်၊
CSB ဘာသာရပ်များမှတင်ပြထားသည်မှာလိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုလျော့ကျလာခြင်း၊ (N ကို = 11) ...
ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB ဘာသာရပ်များလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူသိသိသာသာပိုပြီးအခက်အခဲရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမို erectile အခက်အခဲများကြုံတွေ့ပေမယ့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း sexually ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာသာပြန်ချက်: CSB ရှိအမျိုးသားများ၏ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၂၅ နှစ်ဖြစ်သော်လည်းဘာသာရပ် ၁၉ ခုအနက် ၁၁ ခုသည်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံသူများနှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ သုတေသီများကမူယင်းသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်အညိုဖျော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားဆုလာဘ်စင်တာ၏တုန့်ပြန်မှုများကိုကြုံတွေ့ရသောဘာသာရပ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်အတင်းအဓမ္မညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုမြင့်မားသောလိင်အလိုဆန္ဒရှိသည်ဟူသောအဆိုအားလုံးဝဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
လက်ရှိနှင့် extant တွေ့ရှိချက်ဘုံကွန်ယက်ကိုအသီးသီး CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းနှင့်အတူအုပ်စုများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue reactivity ကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-cue reactivity ကိုအဘို့အရှိကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒစားသုံးမှုမမှန်အခြေခံကွန်ရက်မှာထပ်နေအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဘာသာပြန်ချက်: မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲထဲမှာအသိမြှတူညီတဲ့ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတူညီဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုပါဝငျသညျ။ အကဲဆတ်ခြင်းမော်လီကျူးယန္တရားများကိုကောင်းစွာထူထောင်ကြသည်: အကျိုးကိုစင်တာအတွက် DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်း
ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုအထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ compulsive အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအခက်အခဲများဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ် Non-အန္တရာယ်ရှိသောအမူအကျင့်ထိုသို့သောပစ္စည်းများအသုံးပြုနိုင်သည်သူပိုမိုကျယ်ပြန်လူဦးရေအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မတဦးချင်းစီ၏အဖွဲ့ခွဲမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအလေးပေးပြောကြား။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အထူးသဖြင့် CSB အုပ်စု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှပိုကောင်း limbic reactivity ကိုအပေါ်အသက်အရွယ်တစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖော်ပြသည်။ ငယ်ရွယ်တစ်ဦးချင်းစီအကြားအပါအဝင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုမကြာသေးမီကတိုး, နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖို့အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ပေး CSB ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အအန္တရာယ်အချက်များ (အထူးသဖြင့်လူငယ်) ဖော်ထုတ်အာရုံစိုက်အနာဂတ်လေ့လာမှုများမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
ဘာသာပြန်ချက်: ဒီလေ့လာမှုရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်“ လိင်စွဲလမ်းမှု” အကြောင်းပြောပေမယ့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမှုအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာလူငယ်များအတွက်သတိကြီးစွာထားပါတယ်။
hypersexuality ရောဂါသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ချေါထားပြီးဖြစ်သောလိင်အတွက်အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ပြဿနာထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, သိသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များသယ်ဆောင်စေခြင်းငှါတစ်အတော်လေးဘုံလက်တွေ့ entity ဖြစ်ပါသည် ။ အမြားအပွားကိုအဓိကစိတ်ရောဂါ epidemiological လေ့လာမှုများ CSB ၏အစီအမံမပါဝင်ပါဘူးအဖြစ်အတိအကျခန့်မှန်းမသိသောဖြစ်သော်လည်းလက်ရှိဒေတာ CSB များအတွက်နှုန်းထားများစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအလားတူနှုန်းထားများနှင့်အတူအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်း-based ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်%2မှ4ကနေအထိအံ့သောငှါအကြံပြု -အဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့်နိမ့်နှုန်းထား CSB သတ်မှတ်ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. အစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့် ။ CSB ၏တိကျသောပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်အတွက်တစ်ဦးကရှုပ်ထွေးအချက်အဆိုပါရောဂါများအတွက်တရားဝင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏မရှိခြင်းပါဝငျသညျ။ hypersexual ရောဂါများအတွက်စံ DSM-5 များအတွက်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်ပေမယ့် , ထိုရောဂါ DSM-5 တွင်ထည့်သွင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ သို့သော် CSB သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအဖြစ်, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ခံစားခကျြကတိုက်ရိုက်စာမေးပွဲအချက်ကိုခိုင်လုံမှု။
CSB တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါသို့မဟုတ် non-ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ် "အပြုအမူ" စွဲလမ်းအဖြစ်အခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အဆိုပြုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်အတူအခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံး conceptualize မှ ။ ရှိပြီးသားဒေတာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (သို့မဟုတ်လောင်းကစားရောဂါ) ပေါ် အခြေခံ. မကြာသေးမီကအပြုအမူစွဲအဖြစ်ဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတူ DSM-5 အတွက် reclassified ခဲ့သည် ။ သို့သော်အခြားရောဂါများ (ဥပမာ, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသောသူတို့အား, ဗီဒီယို-ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်လိင်) ကြောင့်အခြေအနေများအပေါ်ကန့်သတ် data ကိုမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, DSM-5 ၏အဓိကအပိုင်းများတွင်မပါဝင်ခဲ့ကြသည် ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးတိုးတက်လာသော CSB ၏နားလည်မှုနှင့်ဘယ်လိုမှတူညီပြခြင်းငှါသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်ကနေကွဲပြားခြားနားမှုခွဲခြားအားထုတ်မှုနှင့်ပိုပြီးထိရောက်သောကာကွယ်တားဆီးရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုနှင့်အတူကူညီလိမ့်မည်။ (ပျြောမှေ့စသို့မဟုတ်အကြိုးအပြုအမူတွေကိုကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်ဥပမာ) ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှု, လောင်းကစားဝိုင်းနှင့် hypersexual မမှန်အကြားပေးသောတူညီ, CSB အတွက်စှဲ (ဥပမာ, cue reactivity ကို) ရမ်းတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှအဓိကဒြပ်စင်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။
Cue reactivity ကိုပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှအရေးကြီးပြောပြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြီးထွား cue reactivity ကို relapse နှင့်ဆက်စပ်နေသည် , ။ အရက်, နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းအပါအဝင်အလွဲသုံးစားလုပ်၏ဝတ္ထုများကိုဖြတ်ပြီး cue reactivity ကိုအတွက်လေ့လာမှုများ၏မကြာသေးမီကအရေအတွက် Meta-analysis သည် Self-အစီရင်ခံ cue- မှလှုပ်ရှားမှုထပ်နှင့်တကွ, ventral striatum, dorsal anterior cingulate (dACC) နှင့် amygdala အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှထပ်လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြ dACC, pallidum နှင့် ventral striatum အတွက်သွေးဆောင်တဏှာ ။ သို့သော်အတိုင်းအတာသောဤဒေသများနှင့် CSB လေ့လာခဲ့ရသေးခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် differential ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue reactivity ကိုပြသခွေငျးငှါရန်။
ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များတဦးတည်းမော်ဒယ်တဦးတည်းစွဲဖြစ်လာအဖြစ်စွဲလမ်းအတွက်, "လို" "အကြိုက်" မှ dissociated ဖြစ်ကြောင်း positing အတူစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုရှင်းပြဖို့အဆိုပြုထားပြီ ။ သို့သော်အကြိုက်ဖြစ်သောရန်နှင့်လိုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue reactivity ကိုဆက်စပ်နှင့်၎င်း၏အာရုံကြော CSB အတွက်ဆက်နွယ်နေပါသည်အတိုင်းအတာစနစ်တကျလေ့လာရသေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက် CSB ၏အရှိဆုံးသင့်လျော်သောခွဲခြားပဲ့ပြင်နှင့်ကုသမှုများအတွက်အာရုံကြောပစ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရန်ကူညီဖို့ဒေတာများကိုစခွေငျးငှါ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများယခင်က hypothalamus, thalamus, amygdala, anterior cingulate cortex, anterior insula, ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex, fusiform gyrus, precentral gyrus, parietal cortex နဲ့အလယ်တန်း occipital cortex အပါအဝင်ဒေသများဖော်ထုတ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြ -။ ဤရွေ့ကားဒေသများဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ခံစားမှု arousal, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အထူးသဖြင့် visuospatial အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်။ penile tumescence ၏အစီအမံကိုသုံးပြီး, အ striatum, anterior cingulate, insula, amygdala, occipital cortex, sensorimotor cortex နဲ့ hypothalamus penile စိုက်ထူအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပြသပြီ , ။ ကျား-related ကွဲပြားခြားနားမှုအမျိုးသမီးမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုမို amygdala နှင့် hypothalamic လှုပ်ရှားမှုရှိခြင်းယောက်ျားနှင့်အတူအစီရင်ခံခဲ့ကြ, ဤကွဲပြားခြားနားမှုစာစားချင်စိတ်ကိုပြည်နယ်များကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ ။ Meta-analysis သည်အဆိုပါ ventromedial prefrontal cortex, ventral striatum, amygdala, anterior insula နှင့် mediodorsal thalamus အပါအဝင်ငွေကြေးခေါ်ဆောင်သွားနှင့်အစားအစာရလဒ်များတစ်ဘုံဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုဖော်ထုတ် ။ အစားအစာနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ် amygdala လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပိုပြီးတိတိကျကျအထူးသဖြင့် anterior နောက်ကျနေခဲ့သည်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုလည်းကျန်းမာယောက်ျားတွင်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုရှည်ကြာချိန်နေဆဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေရှင်းလင်းဖို့အောက်ပိုင်းလက်ဝဲ putaminal လှုပ်ရှားမှုနဲ့အောက်ပိုင်းညာဘက် caudate volumes ကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းပြသထားပါတယ် .
အထွေထွေသောလူဦးရေထက်ကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် CSB အာရုံစိုက် Neurophysiological လေ့လာမှုများနှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးကန့်သတ်ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (N ကို = 8) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသေးငယ်တဲ့ Non-paraphilic CSB ဘာသာရပ်များ၏အုပ်စု (N ကို = 8) ကိုအာရုံစိုက်တစ်ဦးကပျံ့နှံ့ MRI လေ့လာမှုနိမ့်ထက်သာလွန်တိုကျရိုကျဒေသများတွင်ပျံ့နှံ့ဆိုလိုပြသ ။ ဘာသာရပ်များ obsessive compulsive ရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်တစ်သမိုင်းရှိခြင်း7ဘာသာရပ်များ၏ 8 အခြားပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခို၏သမိုင်းနှင့်အတူ4၏ 8 နှင့် 1 ၏ 8 နဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်မှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ 52 အထီးနှင့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာကနေစုဆောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏အွန်လိုင်းကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများနှင့်အတူအမျိုးသမီး CSB ဘာသာရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ကြားနေပုံရိပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အငြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့အာရုံကိုထိန်းချုပ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည် P300 တုံ့ပြန်မှုမြင့်မားသော amplitude နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ။ ဒီတိုင်းတာမှုဟာလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်းလိင်မှုဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုများမဟုတ်ဘဲစာရေးသူများအနေဖြင့် P300 amplitude-mediated လိင်ဆန္ဒကို compulsive အပြုအမူများအစားအကြံပြုခဲ့သည်။ Hypersexuality အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်စပ်ဆေးဝါးများ၏အခြေအနေတွင်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာ ၃-၄% နှင့် dopaminergic ဆေးများနှင့်ဆက်နွယ်သော၊ , လည်းပုံရိပ်ပုံစံများ အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့ပြီ။ SPECT dimer technetium-99 မီတာ-ethyl cysteinate သုံးပြီးတစ်ဦးကအမှုအစီရင်ခံစာ CSB လူနာအတွက် mesial ယာယီဒေသများတွင်အတော်လေးတိုးမြှင့်သွေးစီးဆင်းမှုပြသ ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်နွယ်သောလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရှိသော MRI သွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုမှီခိုအားထားမှုသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့လာမှုပိုကြီးလာသည်။ , သောစာရေးဆရာများအကြံပြုစွဲ၏မက်လုံးပေး-လှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။ အများအားအပြုအမူမူကွဲ frontotemporal နှောက်, ventromedial တိုကျရိုကျအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ယာယီဒေသများ anterior သောရောဂါများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည် hypersexuality တစ် voxel-based-morphometry လေ့လာမှု, ဆုလာဘ်-ရှာကြံရမှတ်များနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ညာဘက် ventral putamen နှင့် pallidum အတွက် သာ. ကြီးကျုံ့ပြသ ။ မှတ်ချက်, ဤနမူနာအတွက် hypersexuality 17% အတွက်ကျော်နှင့်ဤလေ့လာမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏ 78% အတွက်အသစ်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပါအဝင်အပြုအမူတွေကိုရှာကြံသည်အခြားဆုလာဘ်နှင့်အတူ 26% အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ယေဘုယျလူဦးရေအတွက် CSB ဘာသာရပ်များအာရုံစိုက်ပါ။
ဤတွင်ကျနော်တို့ Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ထိုကဲ့သို့သောအားကစားလှုပ်ရှားမှုများဗီဒီယိုများကဲ့သို့) စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောနှင့် CSB နှင့်မပါဘဲဘာသာရပ်များအတွက်အကြိုက်၏အကဲဖြတ်ရမှတ်များနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကဗီဒီယိုတွေကိုနှိုင်းယှဉ် cue reactivity ကိုအကဲဖြတ်။ ကျနော်တို့ သာ. ကြီးမြတ်အလိုဆန္ဒပြပါ (လို) ပေမယ့် Non-လိင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကိုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေမယ့်မတုံ့ပြန် (အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးအလားတူ) like နှိပ်မဟုတ်ဘူးမရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကြောင်းတွေးဆ။ ဒေသတစ်ခုအကွာအဝေးကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတုန့်ပြန်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်တော် CSB နှင့်အတူလူနာလေ့လာနေခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့မူးယစ် cue ်ပတ်သက်နေဒေသများတွင် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမို activation ရှိလိမ့်မယ်လို့တွေးဆ အဆိုပါ ventral striatum, dACC နှင့် amygdala အပါအဝင် reactivity ကိုလေ့လာမှုများ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်သည်ဤဒေသဆိုင်ရာ Active function မရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းတွေးဆခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ချင်) ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတွင်ဤဒေသများအတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မယ်လို့ မပါဘဲရှိသူများ။ အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုအခြေခံစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုပေးထား , ငါတို့သည်လည်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးစူးစမ်း။
CSB ဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်-based ကြော်ငြာများမှတဆင့်များနှင့်ကုသရာမှရည်ညွှန်းထံမှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအရှေ့ Anglia ဧရိယာထဲမှာလူထုအခြေပြုကြော်ငြာကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CSB အုပ်စု, စိစစ်အင်တာနက်ကိုလိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ် (ISST) ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်  နှင့်စတင်ခြင်း၏အသက်, အကြိမ်ရေ, ကြာချိန်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်တခုတခုအပေါ်မှာကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး-ဒီဇိုင်းမေးခွန်းလွှာ, အသုံးပြုခြင်း, abstinence, အသုံးပြုခြင်း, ကုသမှုနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များ၏ပုံစံများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ CSB ဘာသာရပ်များသူတို့ CSB များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံမပြည့်စုံအတည်ပြုဖို့စိတ်ရောဂါနဲ့မျက်နှာ-to-မျက်နှာအင်တာဗျူးခံယူ , ,  အတွက် (စားပွဲတင် S1 S1 file) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကို Hypersexual Disorder များအတွက်အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ,  နှင့်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သတ်မှတ်ချက်  အတွက် (စားပွဲတင် S1 S1 file).
ဒီဇိုင်းနှင့်အချက်များ၏သဘောသဘာဝအရ, CSB ဘာသာရပ်များနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအားလုံးယောက်ျားနှင့်လိင်ကွဲခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျားကျန်းမာသန်စွမ်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် CSB ဘာသာရပ်များနှင့်အသက်အရွယ် (+/- ၅ နှစ်) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကလိင်တူဆက်ဆံသူများ၏ကျန်းမာသန်စွမ်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၅ ဦး အရအသက်အရွယ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်တုံ့ပြန်မှုများမှအကဲဖြတ်သည့်အတိုင်းဗီဒီယိုများတွင်ပုဂ္ဂလဒိresponses္ဌာန်တုံ့ပြန်မှုများလုံလောက်မှုရှိစေရန်စကင်နာအပြင်ဘက်ရှိဗီဒီယိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုခံယူခဲ့သည်။ သီးသန့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်၊ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများရှိကြောင်း၊ (ဆေးခြောက်အပါအဝင်) တရားမ ၀ င် ၀ တ္ထုများကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်းနှင့်လက်ရှိအလယ်အလတ် - ပြင်းထန်သောအဓိကစိတ်ကျရောဂါအပါအဝင်ပြင်းထန်သောစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည် (Beck Depression Inventory) > 5) သို့မဟုတ် obsessive-compulsive ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြွရောဂါသို့မဟုတ် schizophrenia (Mini ကိုနိုင်ငံတကာအာရုံကြောအထူးကု Inventory) ၏သမိုင်း ။ အခွားသော compulsive သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲကိုလည်းချန်လှပ်ခဲ့သညျ။ ဘာသာရပ်များအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ် compulsive စျေးဝယ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုအာရုံစိုကျလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်မူးရူး-အစာစားခြင်းရောဂါရောဂါ၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့စိတ်ရောဂါများကအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များလည်း MRI ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုအတှကျအပြခံခဲ့ရသည်။
ဘာသာရပ်များအတွက် UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေးပြီးစီး  Impulse အကဲဖြတ်ရန်, Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory  နှင့်ပြည်နယ်စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory  အသီးသီးစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်အကဲဖြတ်ရန်, obsessive-compulsive Inventory-R ကို obsessive-compulsive features တွေနှင့်အရက်-အသုံးပြုမှု Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (စာရင်းစစ်) အကဲဖြတ်ရန် ။ လူငယ်များ၏အင်တာနက်စွဲမှတ်မှုစမ်းသပ်မှု (YIAT) ကို အသုံးပြု၍ အထွေထွေအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်  နှင့် compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အရွယ်ရောက်စာဖတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း  အိုင်ကျူတစ်ခုအညွှန်းကိန်းရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစကေး (ASES) ၏တစ်ဦးကပြုပြင်ထားသောဗားရှင်း  ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှသက်ဆိုင်ရာအခြားဗားရှင်းသက်ဆိုင်ရာတဦးတည်းဗားရှင်းနဲ့အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်ဝိသေသလက္ခဏာများစားပွဲတင် S1 အတွက်အစီရင်ခံကြသည် S1 file။ CSB ဘာသာရပ်များ (စားပွဲတင် S2 အတွက်ပိုမိုမြင့်မားစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရမှတ်ခဲ့ S1 file) ဒါပေမယ့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါ၏အဘယ်သူမျှမကလက်ရှိ diagnoses ။ နှစျခု 19 CSB ၏လကျအောကျခံစိတ်မကျဆေး Antidepressants ယူပြီးသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်လူမှုရေး phobia (N ကို = 2) သို့မဟုတ်လူမှုရေး phobia (N ကို = 1) သို့မဟုတ် ADHD တစ်ကလေးဘဝသမိုင်း (N ကို = 1) ယေဘူယျ comorbid ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်း CSB ဘာသာရပ်နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြု 1 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း။
Written အသိပေးသဘောတူညီခကျြရရှိခဲ့သညျ, ထိုလေ့လာမှုကင်းဘရစ်သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှတက္ကသိုလ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်မေးခွန်းလွှာရမှတ်လွတ်လပ်သော t-စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ် Chi-စတုရန်းစမ်းသပ်မှုသုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ Multivariate ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ ASES ရမှတ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်အကြိုက်များ၏ ratings, ရောထွေး-အစီအမံများအတွက် ANOVA တစ်ဦးအကြား-ဘာသာရပ်များအတိုင်းအတာ, ဗီဒီယိုအမျိုးအစား (ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသို့မဟုတ်ခေါ်ဆောင်သွားတွေကို), နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဖြစ်အုပ်စုတစု (CSB non-CSB) နဲ့ခေါ်ဆောင်သွား ratings နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည် (အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်အကြိုက်) အတွင်း-ဘာသာရပ်များအတိုင်းအတာအဖြစ်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ခေါ်ဆောင်သွား non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ငွေကြေးနှင့်ကြားနေ: အပုံရိပ်တာဝန်များတွင်ဘာသာရပ်များ5အခြေအနေများ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်တစ်ဦးတန်ပြန်မျှမျှတတဖက်ရှင်အတွက်တင်ပြဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများရှုမြင်ကြသည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုများဗီဒီယိုအိမ်တွင်းသို့မဟုတ်အိမ်ပြင်ခဲ့လျှင်မေးခွန်းတစ်ခုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်9စက္ကန့်, အဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ ဘာသာရပ်များသူတို့အာရုံကိုပေးဆောင်ခဲ့ကြစေရန်မိမိတို့၏လက်ျာဘက်၌မိမိတို့ဒုတိယနှင့်တတိယဂဏန်းနဲ့ 2-button ကိုသော့ချက်-Pad အသုံးပြု. တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ မေးခွန်း 2000 မီလီစက္ကန်မှ 4000 တစ် Jitter အချင်းချင်းရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အကဲဆတ်သောဗီဒီယိုများဘယ်မှာလိုအပ်သောရရှိသောလိုင်စင်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ဗီဒီယိုများမှရရှိသောကာလူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြားကြည်ကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကပြသခဲ့သည်။ ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုများဥပမာခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဝတ်ဆင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကခုန်သို့မဟုတ်သူမ၏ပေါင်နိန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အမြင်ကွင်းတစ်ခုပါဝင်သည်။ non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဗီဒီယိုများအလွန်အမင်းထိုကဲ့သို့သောနှင်းလျှောစီး, ကောင်းကင်ပြာ-ရေငုပ်, ကျောက်တောင်တက်, ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကယ်-စီးနင်းအဖြစ်နိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံစနစ်ကနေပုံရိပ်တွေကိုနှိုးဆွသောရန်သဘာဝအလားတူအားကစားဗီဒီယိုများပြသ။ ပိုက်ဆံဗီဒီယိုများ, ဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ် paid ခံစက္ကူပိုက်ဆံပုံရိပ်တွေပြသကျသွားသို့မဟုတ်အရပ်ရပ်ကွဲပြားကြ၏။ ကြားနေဗီဒီယိုများရှုခင်းများ၏မြင်ကွင်းများပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါအခြေအနေများ 40 ဗီဒီယိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းပြသခွအေနအေနှုန်းရှစ်စမ်းသပ်မှုတွေ randomized ခဲ့ကြသည်။ အခွအေနေနှုန်းငါးကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုများ 25 ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းပြသခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစကင်နာပြင်ပတွင်ဗီဒီယို-rating တာဝန်များတွင်ဘာသာရပ်တူညီသောဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်များအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ် rating စကေးပြီးစီးခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ2သီးခြားဆလိုက်ရက်နေ့တွင်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုမေးမွနျးခဲ့သညျ: 'ဘယ်လောက်ဒီကသင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်ခဲ့တာလဲ' ' နှင့် '' ဘယ်လောက်သင်ဤဗီဒီယိုကိုကြိုက်ခဲ့တာလဲ '' နှင့် '' အလွန်အများကြီး 'ရန်' 'အလွန်နည်းနည်း' 'ကနေကျောက်ချရပ်နားနေတဲ့မျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက် mouse ကိုသုံးပြီးအဖြေတစ်ခုညွှန်ပြ။ တစ်ဦးအပိုဆောင်း 25 အထီးကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဗီဒီယို-rating တာဝန်အပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ယခင်ကကြိုတင်လေ့လာမှုမှဗီဒီယိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါလျှင်ဘာသာရပ်များဟုမေးခဲ့သည်။ အားလုံးတာဝန်များကို E-ချုပ် 2.0 software ကိုသုံးပြီး coded ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ fMRI လေ့လာမှုများ၏ဝယ်ယူ parameters များကိုဖော်ပြထားပါသည် S1 file။ ၉- စက္ကန့်ဗီဒီယိုကလစ်ပ်များနှင့်စမ်းသပ်မှုကြားကာလများကိုသေတ္တာ - ကား၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဟီမိုဒိုင်းနမစ်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းယေဘုယျ linear မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြု။ ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုအခြေအနေများအတွင်း - ဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်အကြားဘာသာရပ်များအချက်နှင့်အခွအေနေ (ဗီဒီယိုအမျိုးအစား) အဖြစ်အုပ်စု (CSB, Non-CSB) နှင့်အတူ ANOVA ကိုအသုံးပြု။ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအခြေအနေများအနှံ့အုပ်စုတစ်စု၏အဓိကသက်ရောက်မှုကိုပထမ ဦး ဆုံးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အခြေအနေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအားကစားဗီဒီယိုများကိုရှင်းလင်းပြတ်သားသောနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားသောအခြေအနေများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မြေတပြင်လုံး - ဦး နှောက်မိသားစုပညာအမှား (FWE) အထက် activations, P <9 အဓိကသက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်အတွက်သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်တညျ့။ အုပ်စုလိုက်အနေဖြင့် (ဥပမာ CSB (ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်) - ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း (ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်) အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ တစ်ဦး အကယ်၍ အခြေအနေတစ်ခု၏ဆန့်ကျင်ဘက် (ဥပမာ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော) ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ဒေသတစ်ခုလုံးသည် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး FWE P <0.05 အဆင့်ရှိပါကစိတ် ၀ င်စားသောဒေသများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အသက်နှင့်စိတ်ကျရောဂါရမှတ်များကို covariates အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ပုဂ္ဂလဒိmeasures္အတိုင်းအတာအတိုင်းအတာနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတုံ့ပြန်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ ငယ်ရွယ်သောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုမှရမှတ်များနှင့် abstinent ရက်များအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုမော်ဒယ်များတွင်စိတ်ဝင်စားမှု covariates အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။ အသက် covariate ကိုလည်းစုံစမ်းခဲ့ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်ပုဂ္ဂလဒိdesire္ဌာန်ဆန္ဒများကိုအုပ်စုများအကြားထိန်းချုပ်ပြီးရှင်းလင်းစွာဖုံးကွယ်ထားသည်။
အဆိုပါ ventral striatum, amygdala နှင့် dorsal cingulate အကျိုးစီးပွားဒေသများတွေးဆခဲ့ကြသည်။ ခိုင်ခံ့နှင့်အတူဤသုံးပါးဒေသများများအတွက် တစ်ဦး ယူဆချက်ကျနော်တို့ p <0.05 သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမိသားစု - ပညာရှိ - အမှားဆုံးမခြင်းနှင့်အတူသေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ် - ဆုံးမခြင်း (SVC) ကိုအသုံးပြု။ ROIs ပေါင်းစပ်။ dorsal anterior cingulate ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေလိုသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအပြန်အလှန်လေ့လာမှုကို dorsal cingulate (မျိုးစေ့ဒေသ) (သြဒီနိတ် xyz = ၀.၈ ၃၈ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၀ = ၁၀ မီလီမီတာ) နှင့်ရှင်းလင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ mesolimbic နှင့် mesocortical circuit များ၏ဖြစ်နိုင်ချေပါ ၀ င်မှုရှိခြင်းအားဖြင့် sustia nigra တွင်လုပ်ဆောင်မှုကိုရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုအဆင့်တွင်လေ့လာခဲ့သည်။ ယခင်ကအခြားလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုသောအကျိုးစီးပွား၏ ventral striatal ခန္ဓာဗေဒဒေသ (ROI) လက် Martinez et al အားဖြင့် ventral striatum ရဲ့အဓိပ်ပါယျကိုအောက်ပါ MRIcro အတွက်ရေးဆွဲခဲ့သညျ။ ။ cingulate နှင့် amygdala များအတွက် ROIs WFUPickAtlas SPM Toolbox ကိုအတွက် aal တင်းပလိတ်များထံမှရရှိသောခဲ့ကြသည် ။ အဆိုပါ substantia nigra ရွယ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောတင်းပလိတ်များဟာ WFUPickAtlas template ကိုနှင့် 17 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကနေသံလိုက်လွှဲပြောင်းပာသုံးပြီး MRIcro အတွက်လက်ရေးဆွဲရွယ်အပါအဝင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အားလုံးပုံရိပ် data တွေကို Pre-လုပ်ငန်းများ၌တို့ SPM 8 (NeuroImaging, လန်ဒန်အဘို့အ Wellcome Trust မှစင်တာ, ဗြိတိန်) ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
CSB မပါဘဲလိင်ကွဲအထီးကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလေ့လာခဲ့ကြသည်ကိုး CSB (အသက် 25.61 (SD က 4.77) နှစ်) နဲ့လိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့ 19 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက် (အသက် 23.17 (SD က 5.38) နှစ်) (စားပွဲတင် S2 အတွက် S1 file) ။ အလားတူအသက်တစ်ခုအပိုဆောင်း 25 (25.33 (SD က 5.94) နှစ်) အထီးလိင်ကွဲကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဗီဒီယိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့အလုပ်မှာသုံးစွဲဖို့မှုကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (N ကို = 2), ရငျးနှီးဆက်ဆံရေးပျက်စီးသို့မဟုတ်အဆိုးအခြားလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (N ကို = 16), လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile ကြုံတွေ့ အထူးသ (မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆက်ဆံရေးအတွက်ပေမယ့်) မိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက် function ကို (N ကို = 11), ကိုအသုံးပြုစောင့်အရှောက်အလွန်အကျွံ (N ကို = 3), သတ်သေ ideation (N ကို = 2) တွေ့ကြုံနှင့်ငွေပမာဏကို အသုံးပြု. (N ကို = 3; £ 7000 ကနေ£ 15000 မှ) ။ ဆယ်ပါးဘာသာရပ်များဖြစ်စေခဲ့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အပြုအမူများအတွက်အကြံပေးခြင်းရှိကြ၏။ အားလုံးဘာသာရပ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏မြင်ကွင်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များတွင်လည်းအစောင့်အကြပ်န်ဆောင်မှုများ (N ကို = 4) နှင့်ဘာ၏အသုံးပြုမှုကို (N ကို = 5) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစကေးတစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းတွင် ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB ဘာသာရပ်များလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူသိသိသာသာပိုပြီးအခက်အခဲရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမို erectile အခက်အခဲများကြုံတွေ့ပေမယ့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း sexually ဖို့မ (စားပွဲတင် S3 အတွက် S1 file).
ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာလိင်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများကြည့်ရှုအားပေး (HV: 17.15 (SD က 4.74); CSB: နှစ်များတွင် 13.89 (SD က 2.22)) ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်မှဆွေမျိုး (HV: 12.94 (SD က 2.65); CSB: နှစ်များတွင် 12.00 (SD က 2.45)) (အုပ်စုတစ်စု-by-စတင်ခြင်းအပြန်အလှန်: F (1,36) = 4.13, p = 0.048) ။ CSB ဘာသာရပ်များကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းပိုမိုတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဆွေမျိုး (စားပွဲတင် S3 ခဲ့ S1 file) ။ အရေးကြီးသည်မှာ CSB ဘာသာရပ်များသည်အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုအွန်လိုင်းအသုံးပြုမှု၏ ၂၅.၄၉% ကြည့်ရှုရန် (ပျမ်းမျှ ၈.၇၂ (SD ၃.၅၆ နှစ်) နှစ်အတွက်) ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၌ ၄.၄၉% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (t = 25.49, p <8.72) (CSB) vs. HV: လိင်ဆိုင်ရာအတိအလင်းပစ္စည်းအသုံးပြုမှု - တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၁၃.၂၁ (SD ၉.၈၅) vs. ၁.၇၅ (SD ၃.၃၆)၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစုစုပေါင်း - ၃၇.၀၃ (SD ၁၇.၆၅) နှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၂၆.၁၀ (၁၈.၄၀) နာရီ။
Cue reactivity ကို
အုပ်စုတစု-by-rating-type အမျိုးအစား-by-ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအပြန်အလှန် (F (1,30) = 4.794, p = 0.037) ရှိခဲ့သည့်အတွက်ဗီဒီယိုများအလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings dissociated ခဲ့ကြသည်: ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဗီဒီယိုများ ratings အလိုရှိကြသည်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြ ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုမှ like နှိပ် ratings ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြသော်လည်း CSB = F ကို = 5.088, p (ကျန်းကျန်းမာမာစတေနာ့ဝနျထမျး (F ကို = 0.032, p = 0.448) သော်လည်းမခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုမှ (F ကို = 0.509, p = 4.351) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 0.047) သော်လည်းမရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကို (F ကို = 3.332, p = 0.079) ဖြစ်သည်။ R ကို: ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုရန်အလိုဆန္ဒနှင့်အ like နှိပ်ရမှတ်များသိသိသာသာ (HV ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်2 = 0.696, p <0.0001; CSB: R2 = 0.363, p = 0.017) က linear ဆုတ်ယုတ်အုပ်စုများ (F = 2.513, p = 0.121) အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်။ ဆန္ဒရှိသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ဗွီဒီယိုများတွင်ပါ ၀ င်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုအကြံပြုသည့်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၅ ဦး အကြားဆန္ဒနှင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ဗီဒီယိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရမှတ်များကွာခြားမှုလည်းမရှိပါ (p's> 25) ။ ဘာသာရပ်အားလုံးကလေ့လာမှုမတိုင်မီကဗွီဒီယိုများကိုသူတို့မတွေ့ဖူးကြောင်းတင်ပြကြသည်။
အဘယ်သူမျှမအကြား - အုပ်စုသည်အဓိက - အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဦး နှောက် activation ကွဲပြားခြားနားမှုတပြင်လုံးကို - ဦး နှောက်ဆုံးမပဲ့ပြင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုများ၏ဘာသာရပ်အုပ်စုများမှဗိုင်းရပ်စ်သည် FWE p <0.05 level တွင် ventral striatum, dACC နှင့် amygdala လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ပုံ 1, Tables S4 နှင့် S5 အတွက် S1 file) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့် dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်ဒေသများဖြစ်သည့် hypothalamus နှင့် substantia nigra (ဦး နှောက်တည့်မတ်သည့် FWE p <0.05) ၏နှစ်ဖက်သက်ဝင်မှုကိုလည်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ , ။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် occipito-temporal ဒေသများ, parietal နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortices နှင့်လက်ျာ caudate ၏ထင်ရှားပြတ်သား - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နှင့်ခေါ်ဆောင်သွား - ၏ခြားနားချက်များ (တပြင်လုံးကို - ဦး နှောက် - တွန်းအားပေး FWE p <0.05) (ဇယား S4 အတွက် S1 file) ။ သို့သော်ခေါ်ဆောင်သွား၏ဆနျ့ကငျြဘ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဘူး တစ်ဦး တွေးဆဒေသများ။ အလားတူပင်ထိုငွေ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် Parietal နှင့်ယုတ်ညံ့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့ကို ဦး နှောက် - တည့်မတ်သော FWE p <0.05 ကိုဖော်ထုတ်သည်။ တစ်ဦး တိုင်းဒေသကြီးများတွေးဆ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးဆဒေသများတွင်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆနျ့ကငျြဘ - ကျနော်တို့ဘေးကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအတွက်အကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များညာဘက် ventral striatum (အထွတ်အထိပ် voxel XYZ မီလီမီတာအတွက် = 182-2, Z ကို = 3.47, FWE p = 0.032), dACC (0 8 38, Z ကို = 3.88, FWE p = 0.020) နှင့်ညာဘက် amygdala အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြ (32 -8 -12, Z ကို = 3.38, FWE p = 0.018) (ပုံ 2) ။ cue reactivity ကိုအတွက် dopaminergic circuitry များအတွက်အခန်းကဏ္ဍပေးထားကျနော်တို့ကိုလည်း substantia nigra အတွက်လှုပ်ရှားမှုစူးစမ်း။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆနျ့ကငျြဘ - CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအတွက်ညာဘက် substantia nigra (10 -18 -10, Z ကို = 3.01, FWE p = 0.045) တွင် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants အပေါ်သူနှစ်ဦးကိုဘာသာရပ်များဖယ်ထုတ်ပြီးတစ်ဦးကခွဲဆန်းစစ်သိသာတွေ့ရှိချက်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။
အလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်၏တွေကိုနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့ကျနော်တို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုပါဝင်သော covariate ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများမှာတော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ ratings အပြုသဘော (အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုနှင့်အတူ dACC လှုပ်ရှားမှု (-4 18 32, Z ကို = 3.51, p = 0.038) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်ပုံ 3) ။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကြိုက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအာရုံကြောဆက်စပ်ရှိခဲ့သည်။
တစ်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအဆင့်အထိတွင်, အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအသက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ နှင့် dACC (8 20 8, Z ကို = 3.13, FWE p = 0.022): အားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးခေတ်အပျက်သဘောညာဘက် ventral striatum (2 20 -40, Z ကို = 3.88, FWE p = 0.045 ညာ) အတွက်လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ် သာ. ကွီးမွတျလှုပျရှားမှုနှစ်နိုင်ငံ ventral striatum (ညာအတွက်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်အဖြစ် CSB အုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်:418 -2, Z ကို = 3.31, FWE p = 0.013; လက်ဝဲ -8 -18 -2, Z ကို = 3.01 , FWE p = 0.034) (ပုံ 4).
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေကို - မျိုးစေ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှိုင်းယှဉ်ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ dACC လှုပ်ရှားမှု, အ dACC သုံးပြီး psychophysiological အပြန်အလှန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ratings အကြားအသင်းအဖွဲ့ပေးတော်မူ၏။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး, လက်ျာ ventral striatum (8 20 -4, Z ကို = 3.14, FWE p = 0.029) နှင့်ညာဘက် amygdala (120-18, Z ကို = 3.38, FWE p = 0.009) နှင့်အတူ dACC ၏တိုးမြှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့သည် ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုမအကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္အလိုဆန္ဒရမှတ်တစ် covariate အဖြစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်အခါ, အလိုဆန္ဒရမှတ်များနှင့် dACC နှင့်ညာဘက် ventral striatum (122-2, Z ကို = 3.51, FWE p = 0.041) နှင့်ညာဘက် amygdala တို့အကြား CSB ဘာသာရပ်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ (30 -2 -12, Z ကို = 3.15, FWE p = 0.048) (ပုံ 3) နှင့်တစ်ဦးရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအဆင့်တွင်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် (-14 -20 -8, Z ကို = 3.10, FWE p = 0.048) substantia nigra ထားခဲ့တယ်။ အစီအမံ like နှိပ်သက်ဆိုင်သောမျှအရေးပါသောတွေ့ရှိချက်ရှိခဲ့သည်။
လိင်, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဒီလေ့လာမှုမှာ, CSB နှင့်မပါဘဲသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏ပုံစံများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလိုသောနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးထင်ရှားတဲ့ dACC-ventral striatal-amygdala functional ဖြစ်စေ network ကဆက်စပ်နှင့်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် activated နှင့် CSB အုပ်စုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး-salience သီအိုရီနှင့်အညီ, like နှိပ်ထံမှ dissociated သည်ထင်ရှားလိုသော၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီအမံ  အဓိကဆုလာဘ်များမြှင့်တင်ရန်လိုသော်လည်းမအကြိုက်အဲဒီမှာတည်ရှိရသော။ အဆိုပါ ventral striatum အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခံခဲ့ရသည်ကျနော်တို့နောက်ထပ်အထူးသဖြင့် CSB အုပ်စုတွင်, သောအငယ်အသက်အတွက်အသက်အဘို့အအခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာသည်။
ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များသည်လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒပြင်းပြမှုပိုမိုများပြားလာသည်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြလိုသည်။ CSB ဘာသာရပ်များသည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်စိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများပိုမိုဆိုးရွားသည်သာမကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများနှင့်မပါ ၀ င်ပါ၊ CSB ဘာသာရပ်များတွင်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒများကိုပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့်အချက်များနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော dACC လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) dACC, ventral striatum နှင့် amgydala တို့အကြားပိုမိုထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆက်စပ်သောလိုသော။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည့်ပစ္စည်းများကိုအတင်းအကျပ်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများပါ ၀ င်နိုင်သည့်ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ dopamine agonists နှင့်ပတ်သက်သောယခင်လေ့လာမှုအရ hypersexuality လေ့လာမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်နွှယ်သောလိင်ဆိုင်ရာပုံများကိုပိုမိုအာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ။ အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် CSB အာရုံစိုက်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အလားတူမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ဆီသို့ဦးတည်ပေမယ့်မရ '' အကြိုက် 'သို့မဟုတ် hedonic သေံ၏ထစ်အငေါ့လိုသောသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုအလေးပေးနှင့်အတူ dovetail .
နီကိုတင်း, ကိုကင်းနှင့်အရက်၏မူးယစ် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာလေ့လာမှုများ ventral striatum အပါအဝင်ကွန်ရက်များ ဆက်စပ်. အ, dACC နှင့် amygdala ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာဤဒေသများနှင့်အတူအဖွဲ့များကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကြည့်ရှုစဉ်နှင့် CSB မပါဘဲ activated ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ် CSB တွင်ဤဒေသအားကောင်း Active ၏လေ့လာရေးအတွက်မမှန်ဖြတ်ပြီး neurobiological တူညီအကြံပြုခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအဘို့အစောင့်ကြည့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆင်တူသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတုံ့ပြန်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒထက် သာ. ကြီးမြတ်သော dACC လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပိုမို dACC-ventral striatal-amygdala အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှုကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဘာသာရပ်များအတွက်ထက် CSB ဘာသာရပ်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိမြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် ။ CSB ဘာသာရပ်များတွင်လည်းအရှင်ဖြစ်နိုင်သည် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုမှတွေ့ရှိချက်များကိုချိတ်ဆက်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် သာ. ကြီးမြတ် substantia nigra လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လူသားများနှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများခုနှစ်, dACC အဆိုပါ substantia nigra နှင့် ventral tegmental ဧရိယာကနေ dopaminergic စီမံကိန်း၏အရေးပါသောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် , salience နှင့်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြခြေရာခံ။ အဆိုပါ dACC တန်ဖိုးနှင့်ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကိုယ်စားပြုမှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည် ventral နှင့် dorsomedial striatum မှခန္ဓာဗေဒစီမံချက်များပို့ပေးဤသို့စိတ်ခံစားမှုအဓိကဖြစ်ရပ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိသည့် amygdala များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် Basal နျူကလိယမှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိပြီး , ။ အဆိုပါဒေသတွင်လည်း premotor, မူလတန်းမော်တာများနှင့်နံရံပစ်ကစားနည်း-parietal cortical အပါအဝင် cortical ဒေသများနှင့်အတူမျိုးစုံဆက်သွယ်မှုရှိပြီးအရေးယူရွေးချယ်ရေးသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ကောင်းစွာ-ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်။ အဆိုပါ dACC နာကျင်မှု, အနှုတ်လက္ခဏာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ် မကြာသေးခင်လေ့လာမှုများခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်အတွက် dACC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြနှင့်အတူ , အထူးသဖြင့်အရေးယူ-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုလမ်းပြ , ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုတွေ့ရှိချက်တစ်ခုစိတ်ခွန်အားနိုး signal ကိုအဖြစ်အလိုရှိကြသည်တွင်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue-related reactivity ကိုအတွက် dACC အပေါ်ဆုံကွန်ယက်များအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်အတူ dovetail ။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အသက်အရွယ်-related လွှမ်းမိုးမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်နံရံပစ်ကစားနည်း-cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏ရင့်ကျက်အလယ်ပိုင်း 20 ့သို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆက်ရှိနေသေး ။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက်တာ Enhanced အန္တရာယ်စောင့်ကြည့်ရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်တိုကျရိုကျအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသို့မဟုတ်ဟန့်တားအပြုအမူတွေကိုပိုပြီးနှောင့်နှေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် limbic မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆုလာဘ် circuitry ဆွေမျိုးများ၏အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည် , , ။ ဥပမာ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်နှိုင်းယှဉ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း cortical လှုပ်ရှားမှု prefrontal ပိုမို ventral striatal လှုပ်ရှားမှုဆွေမျိုးသရုပ်ပြပါပြီ ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး, ငယ်ရွယ်စဉ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကို sexually ပိုမို ventral striatal လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းစောငျ့ရှောကျ။ ventral striatal လှုပ်ရှားမှု၌ဤအကျိုးသက်ရောက်အထူးယေဘုယျနှင့် CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အသက်အလားအလာ modulatory အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, CSB ဘာသာရပ်များအတွက်အထူးသဖြင့်ကြံ့ခိုင်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု activated ဒေသများမှကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်စာပေနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းတှငျကြှနျုပျတို့ ventral, အ occipito-ယာယီနှင့် parietal cortical, insula, cingulate နှင့် orbitofrontal နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortical, Pre-အလယ်ပိုင်း gyrus, caudate အပါအဝင်အလားတူကွန်ယက်ကိုပြသ striatum, pallidum, amygdala, substantia nigra နှင့် hypothalamus -။ ကျန်းမာယောက်ျားတွင်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုပိုရှည်ကြာချိန် desensitization တစ်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းနေဆဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေရှင်းလင်းဖို့အောက်ပိုင်းလက်ဝဲ putaminal လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပတျသကျပြထားပြီး ။ ဆနျ့ကငျြ, ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုအနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နှင့်အတူအခက်အခဲအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ CSB နဲ့ရောဂါဗေဒအဖွဲ့ကိုအာရုံစိုက်။ ထို့အပွငျ, ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုအကျဉ်းနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းခုနှစ်တွင်, ဗီဒီယိုကလစ်ပ်နှိုင်းယှဉ်ခေါ်ဆောင်သွားနေဆဲပုံရိပ်တွေ၏ကြည့်ရှု hippocampus, amygdala နှင့် posterior ယာယီနှင့် parietal cortical အပါအဝင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကန့်သတ် activation ပုံစံရှိပါတယ်  အကျဉ်းချုပ်ကိုနေဆဲပုံရိပ်တွေနဲ့ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုကြာကြာဗီဒီယိုများအကြားဖြစ်နိုင်ခြေအာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုခြင်း။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကင်းအသုံးပြုမှုမမှန်အဖြစ်စွဲလမ်းပုံမမှန်လည်းအပန်းဖြေကင်းအသုံးပြုသူများကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုမြှင့်တင်ရန်ရှိသည်ဟုပြကြပြီမဟုတ်သော်လည်းတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသပြီ  အပန်းဖြေနှိုင်းယှဉ်မှီခိုသည်အသုံးပြုသူများအကြားအလားအလာကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, လေ့လာမှုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုလူဦးရေသို့မဟုတ် task ထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းပစ္စည်းများမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းပစ္စည်းများမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများကဖြစ်ပေမယ့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့များ၏ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲစခွေငျးငှါအဘယ်သူသည်ကျန်းကျန်းမာမာတစ်ဦးချင်းစီမှနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြားကွဲပြားစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာလေ့လာမှုသာလိင်ကွဲအထီးဘာသာရပ်များပါဝင်ပတ်သက်နှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများစိတ်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ် CSB မြင့်မားမှုနှုန်းပြစေခြင်းငှါ, အထူးသဖြင့်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီဆနျးစစျသငျ့တယျ ။ လေ့လာမှုမှာ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ယာယီအဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမျိုးစုံအတည်ပြုအကြေးခွံကိုအသုံးပြုပြီးလိင်နှင့်စပ်လျဉ်း functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းသရုပ်ပြပေမယ့်ဒုတိယ, လက်ရှိ CSB အဘို့အဘယ်သူမျှမပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေစံရှိမတည်ရှိခြင်းနှင့်ဤတွေ့ရှိချက်ကိုနားလည်နှင့်ပိုကြီးတဲ့အတွင်းသူတို့ကိုအားမရများအတွက်န့်အသတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ် စာပေ။ တတိယအချက်လေ့လာမှုများ၏ Cross-Section သဘာဝပေးသော, ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကြောင်းကိုအခြလုပ်မရပါ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြော activation ဖြစ်နိုင်သည်ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပိုမိုထိတွေ့မှုကလွှမ်းမိုးတိုးမြှင့်အားနည်းချက်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုရှိမရှိကိုညွှန်းအလားအလာအန္တရာယ်အချက်များ, CSB အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပုံစံများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်ကိုယ်စားပြုရသောမှအတိုင်းအတာဆနျးစစျသငျ့သညျ။ တစ်ဦးအလားအလာသဘောသဘာဝသို့မဟုတ်ထိခိုက်မိသားစုဝင်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သူများထပ်မံလေ့လာမှုများမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။ လေ့လာမှုအတွက်ကန့်သတ်အသက်အပိုင်းအခြားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတွေ့ရှိချက်များကန့်သတ်ရန်လိမ့်မည်။ စတုတ္ထကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုဆက်စပ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူအွန်လိုင်းပစ္စည်းများ compulsive အသုံးပြုမှုအပေါ်လွှမ်းမိုးအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းမကြာခဏအစောင့်အကြပ်န်ဆောင်မှုများကျဘာသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအဘာသာရပ်များသူတို့အပြည့်အဝကုသမှု setting တွင်ဘာသာရပ်များကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိ, အွန်လိုင်းကြော်ငြာများနှင့်ကုသမှု settings ကိုနှစ်ဦးစလုံးထံမှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်လျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ hypersexual ရောဂါ၏ရောဂါများအတွက် DSM-207 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးများတွင်အသုံးပြု5ကုသမှု-ရှာကြံ CSB ဘာသာရပ်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအလားတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (81.1%), တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (78.3%), ဘာ (18.1%) နှင့်လိင်ဖြစ်ခြင်းအများဆုံးမကြာခဏအပြုအမူတွေမှတ်ချက်ပြု ဖှလူကြီးများ (44.9%) နှင့်အတူ  ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဦးရေနှင့်ဤအစီရင်ခံဘာသာရပ်တွင်လူဦးရေအကြားတူညီအကြံပြုခြင်း။ သို့သော်လူဦးရေရှာသောကုသမှုကိုအာရုံစိုက်လေ့လာမှုများလက္ခဏာတွေပိုမိုပြင်းထန်မှုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထက်ပိုပြီးတပြင်လုံးကိုဦးနှောက်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဒေသကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အသေးစားနမူနာများနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကဦးနှောက်ကိုဆုံးချဉ်းကပ်မှုမရှိခြင်းတစ်ကန့်သတ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာတဲ့ပေးထား တစ်ဦး cue reactivity ကိုလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရရှိနိုင် Meta-သရုပ်ခွဲဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးယူဆချက်, ငါတို့သည်လေ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့အတညျ့အတိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမိသားစုပညာရှိသအမှားတစ်ခုဒေသခံစားခဲ့ရ တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိနှင့် extant တွေ့ရှိချက်ဘုံကွန်ယက်ကိုအသီးသီး CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းနှင့်အတူအုပ်စုများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue reactivity ကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-cue reactivity ကိုအဘို့အရှိကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒစားသုံးမှုမမှန်အခြေခံကွန်ရက်မှာထပ်နေအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုကပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူထပ်အကြံပြုစေခြင်းငှါနေစဉ်, နောက်ထပ်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ CSB တစ်ဦးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောင်စဉ်အတွင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲအဖြစ်တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားထားရမည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ရေရှည်နောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူအကြီးစား Multi-စင်တာ epidemiological လေ့လာမှုများ CSB နှင့်၎င်း၏ရေရှည်ရလဒ်များ၏ကြိမ်နှုန်းကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ CSB နှင့် Impulse, compulsive နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုပုံမမှန်အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ် epidemiological လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ အလားတူပင်မမှန်ဖြတ်ပြီး neurocognitive နှင့် neurophysiological profile များကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်နှိုင်းယှဉ်ထပ်မံကဤပုံမမှန်အခြေခံသည့်ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်အာရုံကြောကွန်ရက်များနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုအထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ compulsive အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအခက်အခဲများဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ် Non-အန္တရာယ်ရှိသောအမူအကျင့်ထိုသို့သောပစ္စည်းများအသုံးပြုနိုင်သည်သူပိုမိုကျယ်ပြန်လူဦးရေအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မတဦးချင်းစီ၏အဖွဲ့ခွဲမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအလေးပေးပြောကြား။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အထူးသဖြင့် CSB အုပ်စု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှပိုကောင်း limbic reactivity ကိုအပေါ်အသက်အရွယ်တစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖော်ပြသည်။ ငယ်ရွယ်တစ်ဦးချင်းစီအကြားအပါအဝင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုမကြာသေးမီကတိုး, နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖို့အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ပေး CSB ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အအန္တရာယ်အချက်များ (အထူးသဖြင့်လူငယ်) ဖော်ထုတ်အာရုံစိုက်အနာဂတ်လေ့လာမှုများမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
ကျနော်တို့ Wolfson ဦးနှောက် Imaging Center မှာလေ့လာမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသောသူအပေါင်းတို့သည်သင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Voon တစ် Wellcome Trust မှအလယ်အလတ် Fellow ဖြစ်ပါတယ်။ channel4လေ့လာမှုအဘို့အင်တာနက်-based ကြော်ငြာများအားမရသဖြင့်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူကူညီများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
Wellcome Trust မှအလယ်အလတ် Fellowship ရန်ပုံငွေ (093705 / Z ကို / 10 / Z ကို) ကထောက်ပံ့ပေးရန်ပုံငွေရှာခြင်း။ ဒေါက်တာ Potenza ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေ P20 DA027844 နှင့် R01 DA018647 နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများ၏ Connecticut ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန, အဆိုပါ Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာတွင်; နှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသား Center မှသုတေသနဆုကိုလောင်းကစားအတွက် Excellence တစ်ရေးစင်တာ။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
2 ။ တစ်ကောလိပ်နမူနာအတွက် Odlaug BL, Grant က je (2010) Impulse-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမင်နီဆိုတာ Impulse Disorders အင်တာဗျူး (MIDI) မှရလဒ်များကို။ Prim စောင့်ရှောက်အဖော် J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 12 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ hypersexual ရောဂါအပေါ်ရိဒ် RC (2013) မိမိကိုယ်ကိုအမြင်များ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive 20: 14
6 ။ Kafka အမတ် (2010) Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်အဆိုပြုရောဂါ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 39: 377-400 [PubMed]
7 ။ Kor တစ်ဦးက, Fogel က Y, ရိဒ် RC, Potenza MN (2013) Hypersexual Disorder တစ်ခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြားခံရသငျ့သလော လိင်စွဲ compulsive 20 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ အစည်းအရုံးက AP (2013) Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏စာရင်းအင်းကို manual ။ Arlington, VA သို့: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး။
၈။ Petry NM၊ O'Brien CP (၂၀၁၃) အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် DSM-9 ။ စွဲ 2013: 5-108 [PubMed]
10 ။ Childress AR, Hole AV စနစ်, Ehrman RN, Robbins SJ, McLellan ကို AT, et al ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုအတွက် (1993) Cue reactivity ကိုနှင့် cue reactivity ကိုကြားဝင်။ NIDA Res Monogr 137: 73-95 [PubMed]
11. Kuhn S, Gallinat J (၂၀၁၁) တရားဝင်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတွန်းအားပေးခြင်း၏ပုံမှန်ဇီဝဗေဒ - cue-reactivity ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုကို meta-analysis လုပ်ခြင်း။ Eur J ကို Neurosci 2011: 33-1318 [PubMed]
12 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (2008) ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 363: 3137-3146 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Kuhn က S, Gallinat J ကို (2011) cue-သွေးဆောင်အထီးလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်တစ်ဦးကအရေအတွက် Meta-analysis သည်။ J ကိုလိင် Med 8: 2269-2275 [PubMed]
14 ။ Mouras H ကို, Stoleru ကို S, Bittoun J ကို, Glutron: D, Pelegrini-Issac M က, et al ။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ (2003) ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuroimage 20: 855-869 [PubMed]
15 ။ Arnow BA, Desmond je, Banner ll, ဂလိုဗာ GH, ရှောလမုန်တစ်ဦးက, et al ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက် (2002) ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက် 125: 1014-1023 [PubMed]
16 ။ Stoleru ကို S, et al Gregoire MC, Gerard: D, Decety J ကို, Lafarge အီး။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ (1999) Neuroanatomical Correlate ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 28: 1-21 [PubMed]
17 ။ Bocher M က, Chisin R ကို, Parag Y ကို, ဖရီးမနျး N ကို, Meir Weil Y ကို, et al ။ လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦး 2001O-H15O ပေလေ့လာမှု: တစ်ညစ်ညမ်းကလစ်တုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆက်စပ် (2) ဦးနှောက်ကို Activation ။ Neuroimage 14: 105-117 [PubMed]
18 ။ Redoute J ကို, Stoleru ကို S, Gregoire MC, ကုန်ကျစရိတ် N ကို, Cinotti L ကို, et al ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ (2000) ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ဦးနှောက် Mapp 11: 162-177 [PubMed]
19 ။ ရှင်ပေါလုသည် T, Schiffer B, Zwarg T က, Kruger TH, Karama S က, et al ။ လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ (2008) ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ Hum ဦးနှောက် Mapp 29: 726-735 [PubMed]
20 ။ Ferretti တစ်ဦးက, Caulo M က, et al Del Gratta ကို C, Di Matteo R ကို, Merla တစ်ဦး။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ (2005) Dynamics ကို: fMRI အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသဦးနှောက်ကို Activation ၏ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများကို။ Neuroimage 26: 1086-1096 [PubMed]
21 ။ Hamann က S, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန်ငွေကျပ် (2004) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား။ နတ် neuroscience 7: 411-416 [PubMed]
22 ။ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆုလာဘ်၏ Sescousse, G, Caldu X ကို, Segura B, Dreher JC (2013) ထုတ်ယူခြင်း: လူ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများတစ်အရေအတွက် Meta-analysis သည်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 37: 681-696 [PubMed]
23 ။ Kuhn က S, Gallinat J ကို (2014) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု [PubMed]
24 ။ မိုင်းလုပ်သား MH, Raymond N ကို, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ Mueller BA, လွိုက် M က, Lim က KO (2009) ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 174: 146-151 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ သံမဏိ VR, Staley ကို C, Fong သည် T-, Prause N ကို (2013) လိင်ဆန္ဒမဟုတ်ဘဲ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Socioaffect neuroscience Psychol 3: 20770 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Voon V ကို, ခေါင်းဆောင် Hassan K ကို Zurowski M က, က de Souza က M, Thomsen T က, et al ။ ပါကင်ရောဂါအတွက်ထပ်တလဲလဲနှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ (2006) ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ အာရုံကြော 67: 1254-1257 [PubMed]
27 ။ Weintraub: D, Koester J ကို, Potenza MN, Siderowf အေဒီ, Stacy M က, et al ။ ပါကင်ရောဂါအတွက် (2010) Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: 3090 လူနာ cross-section လေ့လာမှု။ Arch Neurol 67: 589-595 [PubMed]
၂၈။ Kataoka H၊ Shinkai T, Inoue M, Satoshi U (28) ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင်သွေးကြောတွင်းသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ Mov Disord 2009: 24-471 [PubMed]
29. Politis M, Loane C, Wu K, O'Sullivan SS, Woodhead Z, et al ။ (2013) ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော hypersexuality ရှိအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုအာရုံကြောတုန့်ပြန်မှု။ ဦး နှောက် 136: 400-411 [PubMed]
30 ။ ပယ်ရီ, DC, Sturm, et al Seeley WW, Miller က BL, Kramer JH, ့။ (2014) Anatomical အပြုအမူမူကွဲ frontotemporal နှောက်အတွက်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဦးနှောက် [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Somerville LH, Casey BJ (2010) သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ Developmental neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol 20: 236-241 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ Delmonico DL, Miller ကဂျေအေ (2003) အင်တာနက်လိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်: Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး 18
33 ။ ရိဒ် RC, လက်သမား BN, Hook ဖြစ်မှု, Garo S က, Manning JC, et al ။ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-2012 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်များ (5) အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med 9: 2868-2877 [PubMed]
34 ။ အဆိုပါ Net က၏အရိပ်၌ Carnes P ကို, Delmonico DL, Griffin အီး (2001): compulsive အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 2nd Ed ကမှအခမဲ့ Breaking ။ Center ကိုစီးတီး, မင်နီဆိုတာ: Hazelden
35 ။ Sheehan DV, Lecrubier Y ကို, Sheehan KH, Amorim P ကို, Janavs J ကို, et al ။ (1998) က Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI): DSM-IV နှင့် ICD-10 များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု 59 ၏ဂျာနယ်: 22-33 [PubMed]
36 ။ Whiteside SP, Lynam DR (2001) ကငါးအချက်မော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ 30: 669-689
37 ။ Beck ကို AT, ရပ်ကွက် CH, Mendelson M က, ကဲ့ရဲ့ J ကို, Erbaugh J ကို (1961) စိတ်ကျရောဂါကိုတိုင်းတာဘို့တစ်ခုစာရင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 4: 561-571 [PubMed]
38 ။ Spielberg CD ကို, Gorsuch RL, Lushene R ကို, Vagg PR စနစ်, နိုင်ငံတော်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory များအတွက် Jacobs GA (1983) လက်စွဲ။ Palo Alto, CA: စိတျပညာစာနယ်ဇင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။
39 ။ Saunders JB, Aasland ဩဃ, Babor TF, de la Fuentes JR, ထိုအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (စာရင်းစစ်) ၏ Grant က M ကို (1993) ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: အန္တရာယ်အရက်စားသုံးမှု-II ကိုအတူ Persons ၏အစောပိုင်းထောက်လှမ်းခြင်းအပေါ် WHO ကပူးပေါင်းစီမံကိန်း။ စွဲ 88: 791-804 [PubMed]
40. လူငယ် KS (1998) အင်တာနက်စွဲခြင်း - လက်တွေ့ရောဂါအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ Cyberpsychology & အပြုအမူ ၁: ၂၃၇ - ၂၄၄
41. Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJJM, Vermulst AA, Garretsen HFL (2009) The Compulsive Internet Use Scale (CIUS): အချို့သော Psychometric Properties များ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ ၁၂: ၁-၆ [PubMed]
42 ။ နယ်လ်ဆင် HE (1982) အမျိုးသားလူကြီးစာဖတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း။ Windosr, ဗြိတိန်: NFER-နယ်လ်ဆင်။
43 ။ McGahuey, CA, Gelenberg AJ, Laukes, CA, Moreno အက်ဖ်အေ, Delgado PL, et al ။ (2000) ကအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံစကေး (ASEX): ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 26: 25-40 [PubMed]
44 ။ Murray GK, Corlett PR စနစ်, Clark က L ကို, Pessiglione M က, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, et al ။ (2008) Substantia nigra / စိတ္တအတွက် ventral tegmental ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားနှောင့်အယှက်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 13: 239, 267-276 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Martinez: D, Slifstein M က, Broft တစ်ဦးက, Mawlawi အို Hwang DR, et al ။ (2003) positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူလူ့ mesolimbic dopamine ဂီယာ Imaging ။ အပိုင်း II ကို: အ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 23: 285-300 [PubMed]
46 ။ Maldjian ဂျာ Laurienti PJ, Kraft RA, Burdette JH (2003) fMRI ဒေတာအစုံ၏ neuroanatomic နှင့် cytoarchitectonic Atlas-based စစ်ကြောရေးများအတွက်တစ်ဦး automated နည်းလမ်း။ Neuroimage 19: 1233-1239 [PubMed]
47 ။ ဝီလျံသည် SM, ထိုမျောက် mesofrontal dopamine စနစ်၏ Goldman-Rakic ​​PS (1998) နေရာအနှံ့ဇာစ်မြစ်။ Cereb Cortex 8: 321-345 [PubMed]
48 ။ Shackman AJ, Salomon တီဗီ, Slagter HA, Fox က AS, ဆောင်းရာသီ JJ, et al ။ (2011) အနုတ်လက္ခဏာများ၏ပေါင်းစည်းမှုသည် cingulate cortex အတွက်နာကျင်မှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ နတ်ဗြာ neuroscience 12: 154-167 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
49 ။ Shenhav တစ်ဦးက, Botvinick MM, Cohen ကို JD (2013) ထိန်းချုပ်မှု၏မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်: anterior cingulate cortex function ကိုတစ်ဦး Integrated သီအိုရီ။ အာရုံခံဆဲလျ 79: 217-240 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50 ။ Wallis ဟာ JD, Kennerley SW (2010) သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ prefrontal cortex ၌တည်၏။ Curr Opin Neurobiol 20: 191-198 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ Rushworth MF, လမ်းပြ Noonan အမတ်, Boorman ED, ဝေါ်လ်တန် ME, ဘီရန်း TE (2011) တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ဆုလာဘ်-guided သင်ယူမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 70: 1054-1069 [PubMed]
52 ။ ဆုလာဘ်များနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်. anterior cingulate cortex multiplexing သတင်းအချက်အလက်အတွက် Hayden BY, Platt ML (2010) တွင် neuron ။ J ကို neuroscience 30: 3339-3346 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Rudebeck PH သည်, ဘီရန်း TE, Kennerley SW, Baxter MG, Buckley MJ, et al ။ (2008) တိုကျရိုကျ cortex ငျဒသေလုပ်ရပ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားရွေးချယ်မှုအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍကစား။ J ကို neuroscience 28: 13775-13785 [PubMed]
54 ။ Warren, CA, McDonough ဆေးလိပ်သောက် cue-reactivity ကို၏အညွှန်းကိန်းများအဖြစ် (1999) Event-related ဦးနှောက်အလားအလာ BE ။ Clin Neurophysiol 110: 1570-1584 [PubMed]
55 ။ Heinz M က, Wolfling K ကို Grusser သည် SM (2007) Cue-သွေးဆောင်အာရုံရက်အတွက်အလားအလာ evoked ။ Clin Neurophysiol 118: 856-862 [PubMed]
56 ။ Lubman ပစ, Allen က NB, ပီတာ LA က, Deakin JF (2008) မူးယစ်ဆေးတွေကို opiate စွဲအခြားအကျိုးသက်ရောက်စေလှုံ့ဆော်မှုထက် သာ. ကြီးမြတ် salience ရှိသည် Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Psychopharmacol 22: 836-842 [PubMed]
57 ။ Euser AS, Arends LR, အီဗန် BE, Greaves-သခင်ဘုရား et al K ကို Huizink AC အ။ (2012) ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက် neurobiological endophenotype အဖြစ် P300 ဖြစ်ရပ်-related ဦးနှောက်အလားအလာ: တစ် Meta-သရုပ်ခွဲစုံစမ်းစစ်ဆေး။ neuroscience Biobehav ဗြာ 36: 572-603 [PubMed]
58 ။ ဘိန်းဖြူမှီခိုအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ Franken ih, Stam CJ, Hendrik VM က, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က (2003) Neurophysiological သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) 170: 205-212 [PubMed]
59 ။ Franken ih, Hulstijn KP, Stam CJ, Hendrik VM က, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က (2004) ကိုကင်းတဏှာ၏အသစ်နှစ်ခု neurophysiological ညွှန်းကိန်း: evoked ဦးနှောက်အလားအလာများနှင့် cue modulated ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှု။ J ကို Psychopharmacol 18: 544-552 [PubMed]
60 ။ ဗန်က de Laar MC, Licht R ကို, Franken ih, Hendrik VM က (2004) Event-related အလားအလာ abstinent ကိုကင်းစွဲထဲမှာကိုကင်းတွေကိုစိတ်ခွန်အားနိုးဆက်စပ်မှုဖော်ပြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 177: 121-129 [PubMed]
61 ။ Dunning JP, Parvaz MA, Hajcak, G, Maloney T က, Alia-Klein N ကို, et al ။ ကိုကင်းနှင့်အ ERP လေ့လာမှု abstinent နှင့်လက်ရှိကင်း-တစ်ဦးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုမှ (2011) လှုံ့ဆော်အာရုံစူးစိုက်မှု။ EUR J ကို neuroscience 33: 1716-1723 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ Linden DE (2005) က p300: ဦးနှောက်ထဲမှာထုတ်လုပ်နေသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြဘူးဘယ်မှာ? အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 11: 563-576 [PubMed]
63 ။ Sowell ER, Thompson ကလေး, ကေတီဟုမ်း CJ, Jernigan TL, Toga AW (1999) တိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများတွင် Post-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အဘို့အ Vivo သက်သေအထောက်အထား၌။ နတ် neuroscience 2: 859-861 [PubMed]
64 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN (2003) Developmental neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 160: 1041-1052 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, et al ။ (2006) orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို neuroscience 26: 6885-6892 [PubMed]
66 ။ Smith က DG ရှိမုန်ဂျုံးစ် P ကို, Bullmore ET, Robbins TW, Ersche KD (2014) Enhanced orbitofrontal cortex function ကိုများနှင့်အပန်းဖြေလှုံ့ဆော်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုကင်းတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုမရှိခြင်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 75: 124-131 [PubMed]
67 ။ Co-ဖြစ်ပေါ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်လိင်ကွဲပြားမှု: ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် Grant က je, Williams က ka, Potenza MN (2007) Impulse-ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 68: 1584-1592 [PubMed]
68 ။ Poldrack RA, ဖလက်ချာကို PC, Henson RN, Worsley KJ, Brett M က, et al ။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှုအစီရင်ခံဘို့ (2008) လမ်းညွှန်ချက်များ။ Neuroimage 40: 409-414 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tara Berman MD မှ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်အမှန်ဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်” (ABC News)
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မူးယစ်ဖြစ်ပါသည်, သိပ္ပံပညာရှင်များ (အဆိုပါကြေးနန်း) ကိုရှာဖွေ
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Dr. Paul Wright ရဲ့စာတစ်စောင်ကိုသူအလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ t.co/G38fYLTyPL
ဤအဖြစ်အပျက်တွင် The Darewl Mead၊ The Reward Foundation ၏ဥက္ကChair္ဌ @ဦး နှောက်, သူ့သုတေသနကနေထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုမျှဝေဈ ... t.co/kxrmfzkN1g